Qarax Xalay ka Dhacay Wersheddii Caanada ee Muqdisho
USA: Gabar Soomaaliyeed oo loo Xukumay $288,000 doolar kaddib markii shaqada looga eryey Khimaarka..
Phoenix, USA: Xaakim ka tirsan dawladda dhexe ee Maraykanka ayaa shirkadda gawaarida kiraysa ee Alamo ku xakumay in ay gabar Muslimad ah siiso lacag dhan 288,000 oo doolar kaddib markii shirkaddaasi ay gabadhaas shaqada kaga eridey khimaar ay xirnayd oo ay diidey in ay iska dhigto.
Gabadhaas oo magaceeda la yiraahdo Bilan Nur oo 22-jir ah waxaa shaqada laga eryey afar bilood ka dib Sept 11, 2001.
Bilan Nur waxay dalka Maraykanka timid sannadkii 1998 xilligaas oo ay ka soo carartay dagaalkii halakeeyey Soomaaliya, waxaana shirkadda Alamo xafiiskeedka Phoenix ay shaqao siiyeen bishii November 1999, shaqadeeda si wanaagsan in ay u qabsaneysey ayaana warku sheegay. Waxaana 2001 loo diidey in ay khimaar ku xirato shaqada, sidaasna shaqadii looga eryey, dacwadiina hadda ku dhamaatay in loo xukumay $288,000. Xaakimkuna waxa uu sheegay in gabadhaas diinteeda lagu faquuqay sidaasna shirkaddaas loogu xukumay in ay lacagtaas bixiso.
"Several witnesses including expatriate aid workers have claimed that earlier 'evidence' pointing to foreign fighters was doctored to garner international support for operations against Islamists in Somalia." Telegraph
Jariidada Telegraph ee ka soo baxada Ingriiska oo warbixin ka qortay dhacdadii Baargaal ayaa ugu horayn soo xigatey warkii wasiirka maaliyadda DGPL, Gaagaab, ee ahaa in dadka lagu diley aagga Baargaal ay ka mid yihiin dad ka soo jeeda dalalka "America, Britain, Sweden, Morocco, Pakistan iyo Yemen".
Afhayeen u hadlayey safaarada Ingriiska ee Nairobi oo arrinta Soomaaliya la socda waxa uu yiri: Waan la soconaa warka sheegaya in dagaal-yahaniin shisheeya ah lagu diley Soomaaliya, laakiin xilligan la joogo wax akhbaar ah oo ku saabsan ma hayno."
Jariidada oo warkeeda sii wadata waxay qortay: In wararka soo noqnoqonaya ee ay DFKMG iyo Itoobiyaanku ku sheegaan in shisheeye ay ku jiraan Ingriis ay ka dhinac daggaalameen Mujaahidiinta Soomaalida in aan ilaa hadda la cadday loo hayn"
Jariidada Telepraph waxay intaas ku dartay "Dhawr qof oo goob joogayaal ah, oo ay ku jiraan dad ka tirsan hay'adaha Gargaarku waxay sheegeen 'caddaymaha' u horeeya ee muujinaya dagaalyahaniin shisheeye ah in ay tahay arrin xaalad-abuur ah si taageero caalami ah loogu helo hawl-galka looga soo horjeedo Islaamiyiinta Soomaaliyeed" waa sida jariidadu warka u dhigtay'e.
Bishii Janaayo 2007 ayey ahayd markii Jariidada Telegraph ay qortay qoraal ahaa in Igriisku ay Zenawi ku wargeliyeen in uu keeno cadaynta uu u hayey dagaalyahaniinti Britain ama iska aamuso, kaddibna Zenawi juuq laga waayey.. [Britain: Zenawi ama aamus ama caddayn keen in dad reer Britain ah aad dagaalka Soomaaliya ku qabateen]
Dhanka kale waxay jariidadu sheegtay in Cali Maxamed Geeddi uu weerarkii gurigiisa lagu qaaday Galabnimadii Axadii ee ay 7-qof ku dhinteen uu ku eedeeyey Al-Qaeda. Isha: qormada Telepgraph: Islamic terrorist killed in Somalia was British
Qarax xooggan ayaa xalay (oo ay Isniin soo geleysey) ka dhacay meesha lagu magacaabo xerada Tolmada ee aagga wersheddii Caanaha ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada DFKMG. Lama oga khasaaraha halkaasi ka dhacay.
5:30 galabnimo ee Axadii June 3, 2007, Xilli uu Cali Maxamed Geedi ku sugnaa gurigiisa oo ku yaal degmada C/Casiis ayaa waxaa lala beegsaday qarax loo malaynayo ismiidaamin oo... Akhri...